भ्यालेन्टाइन डेका लागि भाडामा ब्वाईफेन्ड चाहिएमा यहाँ सम्पर्क गर्नुहाेस् ! – Nepal Journal
भ्यालेन्टाइन डेका लागि भाडामा ब्वाईफेन्ड चाहिएमा यहाँ सम्पर्क गर्नुहाेस् !
Posted By: Nepal Journal February 14, 2018 | २ फाल्गुन २०७४, बुधबार १२:४४
तापईले मजाक मजाकमा वा रमााइलोका क्रममा साथीहरुबाट भ्यालेनटाइन डे का लागि ब्वाइफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड नभएकाले भाडामा लिने भन्ने त सुन्नु भएको होला । तर यहाँ एउटा ब्वाइफ्रेन्ड भाडामा पाइने भनेर साँच्चैको प्रचार भइरहेको छ । एकजना केटा भ्यालेनटाइन डे को मौकामा भाडाको ब्वाइफ्रेन्ड बन्नका लागि सामाजिक सञ्जालमा प्रचार प्रसार गरिरहेको छ ।
यसका लागि ती केटाले आफ्नो फेसबुक अकाउन्टबाटै आफ्नो प्रचार सुरु गरेको छ । भारतको गुरुग्राममा रहने शकुल गुप्ताले आफ्नो फेसकुक अकाउन्टका माध्यमबाट भाडाको ब्वाइफ्रेन्ड बन्नका लागि प्रस्ताव गरेका छन् । उनको यस्तो अनौठो प्रस्तावको खबर भ्यालेन्टाइन डे भन्दा ठीक एकदिन पहिले सार्वजनिक भएको थियो ।
एक मिडिया रिपोर्टका अनुसार शकुलले यस भ्यालेन्टाइन वीकमा यो अफर लिएर आएका हुन् । सामाजिक सञ्जालमा उनको यो पोस्ट तीव्र गतिमा भाइरल भइरहेको छ । उनले ‘भ्यालेन्टाइन डे ब्वाइफ्रेन्ड रेन्टल’ लेखेर फेसबुकमा एउटा पोस्ट हालेका थिए ।
उनको यस अफरमा चार अलग अलग प्याकेज रहेका छन् । उनी आफ्नो सेवामा केटीहरुलाई २० प्रतिशतसम्म छुट दिनुका साथै ओडी कारमा निःशुल्क राइडको सुविधा पनि दिइरहेका छन् ।
शकुलको उमेर २६ बर्ष रहेको बताइएको छ । उनले पोस्टमा आफ्नो तौल ५६ किलो र उचाई १६० सेन्टीमिटर भएको बताएका छन् । यसका साथै आफूले कुनै पनि प्रकारका खाना बनाउन सक्ने बताउदै इच्छुक केटीहरुले कमेन्ट वा म्यासेज गर्नसक्ने भन्दै आफ्नो फेसबुक र इन्स्टाग्रामको आईडी पनि पोस्ट गरेका छन् ।
Be the first to comment on "भ्यालेन्टाइन डेका लागि भाडामा ब्वाईफेन्ड चाहिएमा यहाँ सम्पर्क गर्नुहाेस् !"